आयातित मोटरसाइकलको कर बढाएकै हो : अर्थमन्त्री शर्मा - Sunaulo Nepal
आयातित मोटरसाइकलको कर बढाएकै हो :...
भाद्र २८, २०७८ सोमवार १४:४० बजे
काठमाडौं । संसदमा पेश गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रुपले उठेका सवालहरुमा स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोष्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेययकका मुख्य मुख्य विषयहरु उपर उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् ।
स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्षमा सहयोग पुर्याउने खालका उद्योगहरुलाई छुट दिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिँदा राजश्व पनि बढ्छ । दीर्घकालिन हिसावले देशलाई फाइदा हुन्छ । राजश्व वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरु पनि छन् । करको दायरा विस्तार गरेर भएपनि राजश्व वृद्धिको लक्ष पूरा गर्न सकिन्छ ।
दसैंको नाममा जथाभावी खाँदा ‘फूड पोइजनिङ’को खतरा : कसरी जोगिने ?
यसरी सजिलै बनाउनुहोस् ‘चिकेन रोस्ट’
दसैंमा नेपालीले कति खान्छन् मासु ? : ९ करोड १९ लाख किलो मासु खपत